Ibex vs Eurostoxx: ngikhethe yiphi inkomba? | Ezezimali Zomnotho
Ibex vs Eurostoxx: ngikhethe yiphi inkomba?
Enye yezinkinga izinkulungwane nezinkulungwane zabatshalizimali abancane abanazo ngalesi sikhathi yingakho inkomba yesitoko izokhetha ngalesi sikhathi. Kuphakathi kokukhetha kukazwelonke, i-Ibex 35 noma, ngokwehluleka lokho, ngabamele imakethe yamasheya yaseYurophu, i-Eurostoxx 50. Ukufika ezingeni lokuthi izikhathi eziningi ukunganaki kufakwe ngombono wabasindisi. Yize empeleni lezi kuyizimpawu ezimbili ezifanele zengeniso eguquguqukayo ye- indawo efanayo yezomnotho ngaphakathi kwezwekazi elidala. Leli qiniso bekufanele libe yisinqumo ukuze ukuvela kwabo ezimakethe zezimali kufane kakhulu.
Kunoma ikuphi, kuzobaluleke kakhulu ukuthi uqaphele noma yimuphi umehluko omncane phakathi kwezikhwama ezimbili. Kungaba yisinqumo sokuphela kokukhetha imakethe eyodwa noma enye. Yize umehluko ngeke neze babe ngokweqile noma babe nodlame, njengoba nje bekuyizimakethe ezingaphesheya kwe-Atlantic, Asia noma enye indawo ekude noma exotic. Ukuze ube nefayela le- umqondo okuchazwe kancane kusuka manje, sizokusiza ukuthi wazi okuthile ngalezi zikhungo zezezimali nsuku zonke kushintshaniswa izihloko eziyizigidi eziningana.
Ngokomthetho, akekho omunye noma omunye ongcono noma omubi ngokomthetho. Ngaphandle kokuya ngesimo semakethe ngayinye yezezimali. Ngisho nengqikithi ejwayelekile yomnotho jikelele kanye nemingcele yezomnotho eyinhloko izothatha isinqumo. Yize kunento eyodwa eqinisekile ongayingenisa futhi lokho ukuthi ukweqisa ku- amanani abo alawulwa kahle kakhulu. Kokubili ngomqondo owodwa nakomunye, njengoba kuye kwabonakala eminyakeni yamuva. Akumangalisi-ke ukuthi sebephenduke izingxoxo ezimbili ezingashintshi neze emhlabeni.
1 Kufanele ngingene ku-Eurostoxx?
2 Ukuvela kwezinkomba ezimbili
3 Isimo kumathrendi
4 Ungathengisa kanjani ngalezi zinkomba?
5 Yini engcono manje?
Kufanele ngingene ku-Eurostoxx?
Inkomba ekhethiwe yezwekazi elidala ihlanganisa ingxenye enhle yezinkampani ezibaluleke kakhulu zaseSpain ezibalwe kumasheya. Phakathi kwabo, futhi kungenzeka kanjani ukuthi kube ngenye indlela, i- ama-chips aluhlaza okwesibhakabhaka: BBVA, Iberdrola, Banco Santander, Endesa noma iRepsol. Njengomphumela walesi simo, kunikezwa iqiniso elifuna ukwazi kakhulu ukuthi ungatshala imali oyongile kunoma yiziphi izimakethe ezimbili zezezimali lapho amasheya abo abhalwe khona. Noma kunjalo, kuzohlala kuzuzisa kakhulu ukukhetha inkomba kazwelonke ekhethiwe. Ngaphezu kwanoma yini ngoba iletha amakhomishini ancintisana kakhulu. Ngamanani angaphansi kwelaseYurophu futhi lokho kuzokusiza ukuthi wonge imali enkulu njalo lapho uvula noma uvale izikhundla kunoma yikuphi ukuphepha kwayo kwezezimali.
Ngokwalo mbono, ngeke ube nokungabaza ukuthi ungaya kuphi ukuze utshale imali kwizimali. Vele kunjalo, kepha kukhona nezinye izinto ezizofaneleka kakhulu kuwe ukwenza isinqumo sakho sokugcina. Awukwazi ukukhohlwa ukuthi i-Eurostoxx 50 ibhalwe ohlwini lokushintshisana okubaluleke kakhulu ezwenikazi laseYurophu. Kufinyelela ezingeni lokuthi uzonquma ukuvela kwayo, kungaba phezulu noma phansi. Kepha nge ukungafani okubaluleke kakhulu, hhayi ngomqondo othile noma omunye. Kunoma ikuphi, bangabanye babaqokelwe ukwamukela imali oyilondolozile kanye neminyaka embalwa ezayo.
Ukuvela kwezinkomba ezimbili
Okokuqala, uzozibuza ukuthi yiziphi izimakethe eziziphatha ngalesi sikhathi esiqondile. Yebo, ukukhetha kweSpain kwakuyinkomba engcono kakhulu yaseYurophu ngekota yokuqala yonyaka. Abatshalizimali abancane nabaphakathi kubonakala babuyise ukuzethemba kwabo kule makethe yezimali. Empeleni, kuze kube manje kulo nyaka, i-Ibex 35 yazise ngokungaphezulu kancane kuka-10%. Cishe ikuphinda kabili lokho kwamanani ezwekazi, akhule cishe ngo-5% kulesi sikhathi. Kulokhu kuhlaziywa kubukeka sengathi into ebaluleke kakhulu ukutshala imali emakethe yamasheya aseSpain.
Kepha akusona isinqumo esilula kangako okufanele usenze kusukela manje kuqhubeke. Isizathu singenxa yokuthi ukusebenza komkhakha wamabhange waseSpain kuzoba kubaluleke kakhulu. Ngoba awukwazi ukukhohlwa ukuncika okuphawulekayo enakho kumasheya isisindo samaqembu ezezimali. Okungaphezulu kakhulu kwe-Eurostoxx 50, ebonakala ngokulinganisela kakhulu maqondana namalungu ama-stock indices ayo. Kunoma ikuphi, kuzoba yisici okufanele usicabangele ukuhlobana nezwe lemali elihlale liyinkimbinkimbi.
Ngoba impela, i-Eurostoxx 50 nayo ayinayo amaqembu amakhulu ezezimali. Yize ngokuphambene nalokho, ikwazile ngezinga elincane kunokukhethwa kukazwelonke. Kepha kufanele ukhumbule ukuthi kwakusemuva kweminyaka eminingi kwikhotheshini yamanani ayo. Kungaba imininingwane emincane engathwebula ibhalansi yenkomba eyodwa noma enye yokulingana. Lapho i- isici sobuchwepheshe Kuzoba enye into okufanele uyicabangele kusukela manje kuqhubeke.
Naphezu kwakho konke, kuzobuye kubaluleke kakhulu ukuthi izindawo ezimbili zomhlaba zihlangane ukucwiliswa ekuphakameni. Hhayi emaweni kakhulu, kepha ngokukhuphuka ekugcineni kosuku. Lapho bangazama khona ukuthatha amazinga amasha aphezulu ngentengo yabo. Umbuzo uzoba ukuthi ungakunqoba yini ukumelana kwakhe okulandelayo. Kwezinye izimo, ngokuqinisekile ngaphandle kobunzima obuthile ngenxa yezinkinga zesimo sezepolitiki ezithinta eminye yeminotho emikhulu yendawo ye-euro.
Umthelela wamazinga wenzalo emnothweni waseYurophu nawo kuzodingeka ubhekwe. Kukhethekile uma i-European Central Bank ithatha isinqumo shintsha isu lemali bese unquma phakathi nonyaka ukuwalayisha. Ithonya layo lizoba ngaphezu kokuthatha isinqumo ukuze liqhubeke nokuqhubekela phambili ezinyangeni ezisanda kwedlula. Kokubili kokukodwa nakwezinye izinkomba zokulingana. Kuze kube seqophelweni lokuthi
Ngalo mqondo, yize zombili zixhunywe ezinqumweni zebhange elikhipha iYurophu, inkomba yezwekazi yamukela kakhulu yonke imisebenzi. Ngokufana cishe nesikhathi sangempela sakho konke okwenzeka endlunkulu yesikhungo sezezimali. Akumangalisi ukuthi kungabonakala njengomkhulumeli wakho embonini yezimali. Ngenkathi i-Ibex 35 ezimweni eziningi ekwenzayo ihambisana nokuthambekela kwalesi sikhombisi sesitoko. Ngokufana okubalulekile phakathi kwalaba ababili nokuthi izikhathi eziningi amanani abo ahlala emazingeni afanayo okukhuphuka noma okuwa.
Ungathengisa kanjani ngalezi zinkomba?
Ukuthatha izikhundla kulezi zinkomba zamasheya kulula futhi akunikeli noma yiziphi izinkinga zokukwenza ebhange lakho elijwayelekile. Kungaba kusuka egatsheni lasebhange noma kusuka kwikhompyutha noma ngisho ithebhulethi noma iselula. Zizodinga kuphela ukuthi ube iklayenti lesikhungo sezezimali, akukho okunye. Yimisebenzi elula ukuyithuthukisa eyehluka kuphela kumanani ekhomishini abo. Ngoba empeleni, ukusebenza nezimakethe zikazwelonke kuhlale kushibhile kunokushiya imingcele yethu. Ngenye yezinzuzo zokukhetha lolu hlobo lokutshala imali.
Ngomshini ofanayo ngokuphelele kuzimo zombili, ngaphandle komehluko. Kuzofanele ukhethe kuphela ukuthi yimiphi imakethe lapho ukhetha ukwenza khona ukonga kube yinzuzo. Akukho okunye. Lesi sinqumo singasuselwa ku- ukuthambekela kwephoyinti lapho kufakwa khona izinkomba. Kwezinye izimo ungaba inketho engcono kakhulu kanti kwabanye imbangi yakho ezimakethe zezezimali. Kuzo zombili iziphakamiso, uzoba neqembu lezinkampani ezizokhetha ukwanelisa isidingo sakho sokungena nokuphuma kulezi zimakethe zezezimali.
Yini engcono manje?
Vele, okwamanje isici sobuchwepheshe se-Ibex 35 sisikisela kakhulu kunaleso sesibonakaliso sokulingana saseYurophu. Yize isimo esifanayo singahlali senzeka ngaso sonke isikhathi, kude naso. Ngoba nganoma yisiphi isikhathi ingashintsha, ibe yimbi kakhulu ngaphandle kokunyakaza okunamandla kakhulu noma ukunqanyulwa phakathi kwenkomba eyodwa yemali eguqukayo nenye. Kuphi Ukwehluleka kwemali kungenye yezinto ezivamile kuzo zombili izimakethe zezezimali. Ukuthi ungangena futhi uphume ezikhundleni zabo nganoma yisiphi isikhathi, ngaphandle kwezinkinga.
Kuyaphawuleka futhi ukuthi zombili izimakethe zivezwa iqiniso lezomnotho endaweni ye-euro. Futhi-ke, i-euro isezingeni elifanayo nezimali eziyinhloko zomhlaba wonke. Ngokwengxenye kuyenzeka ngezinye izimakethe zamasheya zamazwe omhlaba ezinokubaluleka okukhethekile. Kodwa-ke, i-Eurostoxx ine inkomba enkulu ezimakethe zamasheya zomhlaba kunenkomba yethu. Ngenxa yezizathu wonke umuntu uzoqonda futhi lokho kwenza esinye sezilinganiso zezimali zamazwe omhlaba.
Okwamanje, amanani we-Ibex 35 akhanga ngokwengeziwe. Nge- amandla okwazisa aphezulu. Kepha qaphela kakhulu, ngoba lezi zinhloso zingaphela noma nini. Ngokushintsha kokulindelwe kwezikhwama eminyakeni embalwa ezayo. Ikakhulukazi ngenxa yesimo sokuxakaniseka amanye amazwe angamalungu e-European Union abhekene naso kwezepolitiki. Ikakhulu, konke okuzungeze iFrance nokuthi kungenzeka ukuthi kuphume i-euro.
Kunoma ikuphi, isinqumo sokukhetha inkomba yesitoko esisodwa noma esinye siyoba nawe. Akekho omunye, yize kufanele isuselwe kuzinhloso ezisiza ukuthi uhlele ukusebenza. Ngenhloso echazwe kahle futhi lokho akuyona enye ngaphandle kokuthola okuningi esimeni sakho njengomtshalizimali omncane naphakathi. Okuwukuphela kwalokho okuyikho, njengoba uzokwazi kahle ngeminyaka yakho eminingi yolwazi ezimakethe zezezimali.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Ibha » Ibex vs Eurostoxx: ngikhethe yiphi inkomba?
UJuan | imali kusho
Ngokwami, ngizozizwa ngithule uma ngiku-Eurostoxx, njengoba leli qembu liqine ngokwengeziwe. Yize kungabonakali njengomongameli abalandelayo e-Eurozone eNetherlands naseFrance, bazoluthinta kakhulu lolu daba. Futhi bazobona izinguquko kwezomnotho, njengoba bezwakala ezinkulumweni zepolitiki zombili bomongameli.
Phendula uJuan | imali
Remy wizink kusho
Ngicabanga ukuthi ukumangala kwezomnotho kuzoqhamuka emazweni aseScandinavia, hhayi ukuthi kube ngcono ... intando yeningi yezenhlalo ayikwazi ukumelana nayo.
Phendula ku-Remy Wizink
Yini okufanele uyenze uma uwina ilotho?
Amasu okutshalwa kwezimali: ukudluliselwa phakathi kwezimali